ICJ oo muranka ka saartay badda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
ICJ oo muranka ka saartay badda Soomaaliya
Guud ahaan bulshada Soomaalida ayaa si weyn ugu diirsatay, go’aanka Maxakamadda, Waxaana horraanba billowday dabbaal-degyo guusha laga gaaray Kenya oo duullaan ku ahayd badda Soomaaliya.
THE HAGUE – Soomaaliya ayaa kiiska dacwada badda ku garaacday dhiggeeda Kenya, kadib markii, Maxakamadda Caalamiga ee Cadaaladda (ICJ), ay ugu danbeyn muranka ka saartay badda Soomaaliya ee Kenya dooneysay in ay boobto tan iyo 2005.
Madaxweynaha ICJ, Garsoore, Joan E. Donoghue, ayaa hadda ku dhawaaqday, in Soomaaliya ay ku guuleysatay dacwada muddada todobada sano ah taallay The Hague, Netherlands, kadib ku dhawaqis ka dhacday Qasiga Nabadda (The Peace Palace) oo ku yaalla Holland.
Gudaha hoolka Maxakmadda waxaa ku suganaa, wafdi heer sare ah oo Soomaali ah oo uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, oo subaxnimadii Axadda gaaray magaalada Hague.
Kooxdan oo ka kooban lix xubnood, waxaa qeyb ka ah, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud, xeer ilaaliyihii hore Axmed Cali Daahir, Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda, Yuusuf Garaad Axmed, Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed Cali Saciid Fiqi iyo xubin kale.
Soomaaliya ayaa dacwadan maanta go’aankeedu soo baxay u gudbisay ICJ, sanadkii 2014 -kii kadib markii uu fashilmay wada hadal lagu doonayay in lagu xaliyo muranka.
Dhul-badeedka Soomaaliyeed ee Kenya muranka galisay, maantana kiiskiisa la soo gabagabeeyay ayuu cabbirkiisu dhanyahay, boqol kun oo kiilo-mitir, oo afar-jibbaaran [100 000 square kilometers], waxaana laga helay Gaas iyo Saliid [hydrocarbons].
Kenya ayaa codsatay in ICJ ay dacwadda dib usoo celiso oo loo oggolaado labada dal inay ka wada-hadlaan khilaafka, laakiin maxkamadda ICJ ayaa February 2017 joojisay codsigii Kenya, iyadoo ku qanacday dooddii Soomaaliya ee ahayd in sharciga iyo maxkamadda caalamiga ee ICJ lagu kala baxo.
Dacwada ayaa xilliyo kala duwan xumaysay xiriirka labada dal, hayeeshee, markii ugu danbeysay ayaa la xalliyay bishii May kadib dhexdhexaadintii Qadar.
Kenya ayaa hore sheegtay in aysan u hoggaansami doonin oo aysan aqoonsan doonin go’aanka ICJ, iyadoo ay xusid mudan tahay in xukun ay gaarto Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda, aan rafcaan laga qaadan karin, maadaama aysan jirin heerar kale oo maxkamdeed.
Wixii faah-faahin ah kala soco bogga hore ee Keydmedia Online